तपाईलाई के रोग लागेको छ, शरीरले यसरी संकेत दिने गर्दछ - महत्वपूर्ण जानकारी - ज्ञानविज्ञान
शरीरको रचना अद्भूत छ । शरीरको भाषालाई बुझ्न सकियो भने हामी संभावित थुप्रै किसिमको रोगबाट बच्न सकिन्छ । किनभने शरीरले कुनैपनि रोगको सुरुवाती संकेत गर्छ । त्यसलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ ।
रोग अनेक किसिमका हुन्छन् । रोगका संकेत पनि अनेक किसिमकै हुन्छन् । रोगको संकेत पहिल्याएर त्यसको उपचार खोज्नुपर्छ । रोगको सुरुवाती लक्षण नै थाहा पाएर त्यसको उपचार खोज्दा बढी सहज र सार्थक हुन्छ । तर, रोग छिप्पिदै गएको अवस्थामा भने कतिपय झन्झट व्यहोर्नुपर्छ ।
शरीरले कुन रोगको संकेत कसरी गर्छ त ? स्वास्थ्यका यी आधारभूत कुरालाई हामीले बुझ्नैपर्छ ।
मधुमेह, जसलाई हामी खानदानी रोग पनि भन्छौं । मूलत ऐशआरम खोज्ने, शारीरिक श्रम नगर्ने, मिठो मसिनो खानेहरु मधुमेहको जोखिममा हुन्छन् । मधुमेह हुँदैछ है भन्ने संकेत शरीरले कसरी दिन्छ त ?
-पटक पटक पिसाब लाग्नु
-विना कारण तौल घट्नु तथा बढ्नु
-आँखा धमिलो हुनु
-तिर्खा धेरै लाग्नु
-भोक धेरै लाग्नु
-घाउ निको हुन समय लाग्नु
-हात दुख्नु तथा सुन्न हुनु
क्यान्सर भन्नसाथ हामी थकर्ममान हुन्छौं । क्यान्सरका विभिन्न प्रकार हुन्छन् । यसले शरीरका छुटाछुटै अंगमा सताउन सक्छ । यसमध्ये छालाको क्यान्सर आम हो । छालाको क्यान्सर भएको संकेत शरीरले कसरी दिन्छ त ?
-चाँदीको रंगको धब्बाको साथमा मोटो रातो छाला
-छाला तथा गर्दन वरिपरि रातो हुनु
-नयाँ कोठी वा मासुको डल्ला देखा पर्नु
-छालाको घाउ बारम्बार आलो हुनु
-छालाको रङ तथा मासुको डल्लोको रङमा परिवर्तित हुनु
जोर्नी सम्बन्धि रोग
बुढ्यौलीमा जोर्नी सम्बन्धी रोगले सताउँछ । त्यसैगरी जाडो याममा पनि जोर्नीको समस्या हुन्छ । जोर्नीको समस्या भएमा शरीरले कसरी संकेत गर्छ त ?
जोर्नी सम्बन्धि समस्या भएमा यी संकेत देखा पर्छ ।
-मांसपेशी निरन्तर दुख्नु
-जीउ सुन्निनु, पोल्नु, मांसपेशी वरिपरि रातो हुनु
-हिँड्डुल गर्नमा कठिनाई
अहिले हामी प्रदूषित वायुमण्डलमा सास फेरिरहेका छौं । हामीले फेर्ने हरेक सासमा धुलो, धूँवा, दुर्गन्ध मिसिएका छन् । यसले हामीलाई फोक्सोको रोगी बनाउँदैछ । कसरी थाहा पाउने त फोक्सोको रोग लागेको ?
-खोकीमा रगत देखा पर्नु
-लामो समय खोकी लाग्नु
-सास फेर्नमा कठिनाई हुनु
-छाती बेस्सरी दुख्नु
-छाती स्वाँ स्वाँ हुनु
-एक महिना भन्दा बढी समयसम्म खकार देखिनु
स्तन सम्बन्धि समस्या
महिलाहरुलाई धेरै सताउने रोग हो, स्तन क्यान्सर । स्तन क्यान्सरको लक्षण सहजै देखिने गरिन्छ । स्तन क्यान्सर मात्र होइन, स्तन सम्बन्धी अन्य रोग पनि सुरुवाती चरणमै पहिल्याउन सकिन्छ ।
-असामान्य रुपमा स्तन कोमल हुन, पिडा हुनु
-निप्पल वा स्तनको छालाको रङ्ग परिवर्तित हुनु
-स्तनको भित्री भाग वा छेउछाउ मोटो हुनु
-काँध मुनीको भाग मोटो हुनु
-निप्पलबाट डिस्चार्ज हुनु
महिलामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या
महिलालाई सताउने रोग हो, प्रजनन सम्बन्धी रोग । महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य यसैपनि संवेदनशिल हुन्छन् । उनीहरुलाई यसको संक्रमण हुने वा अन्य दीर्घ रोग लाग्ने संभावना अधिक हुन्छ । यद्यपी प्रजनन सम्बन्धी कुनै रोग लाग्दैछ भने त्यसको संकेत शरीरले गर्छ ।
-महिनावारी हुदाँ असहय पिडा हुनु
-तल्लो पेट दुख्नु
-योनीबाट सेतो पानी बग्नु
-दुईटा महिनावारी बीचको समयमा रगत देखिनु
पाचन तथा पेट सम्बन्धि समस्या
पाचन सम्बन्धी रोग त नेपालीको साझा समस्या नै हो । खासगरी हाम्रो खानपान र खानपान शैली त्यती स्वस्थ्यकर छैन । यही कारण हामी सानै उमेरमा पेटको रोगले ग्रस्त बन्छौं ।
-दिशामा रगत देखिनु
-दिशा कालो हुनु
-रगत वान्ता हुनु
-मलाशयबाट रक्तश्राव हुनु
मुत्राशयको समस्या भएमा के कस्ता संकेत देखापर्छ ? शरीरले त्यसको लक्षण देखाउँछ ।
मुत्राशयको समस्या भएमा यी संकेत देखा पर्छ ।
-धेरै पटक पिसाब लाग्नु
-पिडा गर्दा असहय पिडा हुनु
-ओछ्यानमा पिसाब फेर्नु
-पिसाबमा नियन्त्रण नरहनु
-राती पनि अत्याधिक पिसाब लाग्नु
इटिङ डिसअर्डर तथा तौलको समस्या
इटिङ डिसअर्डर वा तौलको समस्या भएमा पनि त्यसको संकेत शरीरले गर्छ । कसरी थाहा पाउने त ? -शरीरको बनावट विग्रनु
-धेरै भोक लाग्नु
-प्यास धेरै लाग्नु
थ्रोम्बोसिस सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने पनि शरीरले त्यसको संकेत गर्छ ।
– हात तथा खुट्टा सुन्निनु
-पाखुरा तथा खुटामा पिडा हुनु
-खुट्टा तथा पाखुरा बौडिनु
-हात, खुट्टा तातो हुनु
-छालाको रङ रातो तथा निलो हुनु
Don't Miss it एकछिन् !! के पत्रिकामा चटपटे खानुहुदैछ ? स्वास्थ्य बिगार्न चाहनुहुन्न भने सुरुमा यो पढ्नुहोस्
Up Next भोक कतिको लाग्छ ? भोक लागे पछी मात्र खाने कि समय-समयमा खाने ? जान्नुहोस्
धेरैलाई नयाँ परिकारको स्वाद चाख्न मन हुन्छ तर आफै पकाउने सिप भने हुँदैन । दसैंमा ‘नन भेजिटेरियन’ हरुका लागि घरमा…
तपाईं कुनै रेष्टुरेन्टको मेनुमा आँखा दौडाउनुहोस्, ननभेज परिकारको सूची लामो देख्नुहुनेछ । कुनै भोज-भत्तेरमा पुग्नुहोस्, मासुकै परिकारले प्लेट भरिभराउ हुनेछ…